Dambarefu raAlick Macheso Rotenderedza Musoro Vakawanda
Shasha yemumhanzi wesungura Alick Macheso aratidza kuti haasi zuru rakapinda nyoka sezvange zvofungidzirwa nevamwe vange voti ainge oneswa chitsvuku nevakomana vechidiki veZimdanceHall.
Izvi zvinotevera kubuditsa kwaaita dambarefu rake Tsoka Dzerwendo iro rinonzi nevamwe vanoongorora zvemumhanzi rinogona kupinda munhoroonde yekuva dambarefu rakatengwa kudarika mamwe ose muZimbabwe. Zvinonzi muzuva rekutanga chete kwakatengeswa madambarefu zviuru zana.
Vamwe vanoti Tsoka Dzerwendo rave munzira yekudarika Simbaradzo rimwe dambarefu raMacheso rakatengwa zvakanyanya. Simbaradzo rakatengesa marekodhi zviuru mazana matatu richidarika Maruva Enyika raLeonard Zhakata, dambarefu rainge ratengesa marekodzi zviuru zana nemakumi masere.
Vamwe vatove nedambarefu idzva raMachesu ndi VaRichmond Tera avo vanoti semaonero avo Tsoka Dzerwendo ndiro richave dambarefu regore rino.
VaTera vanoti Macheso semunhu angaachimbotaurwa kunzi apera aratidza hunyanzwi hwake mushure mekumbotizwa nevamwe vaaikwenya navo magitare.
VaTera vanoenderera mberi vachiti kugamuchirwa kwaitwa dambarefu iri muZimbabwe kuchaenderera mberi nekune dzimwe nyika idzo Macheso anomboenda kunoridza dzakaita seBritain, South Africa neBotswana.
Dambarefu iri rine nziyo nhanhatiu imwe yacho irikuita mukurumbira inonzi Kurarama Inyasha.
Imwe yacho ndiBaba iyo inove yekutanga padambarefu iri. Dzimwe dzimbo dziripo dzinoti Munyaradzi, Mude Mude, Gungwa, na Wandirangaridza.
Mumwe anoteverawo mimhanzi yaMacheso, VaMatthias Kufandirimwa vanoti vakatenga dambarefu ravo musi weMuvhuro apo rakabuditswa zvekuti varikutapirirwa. VaKufandirimwa vanoti dambarefu idzva iri rinokwana pese pese kubva kuvachairi vemakombi, michato, kumabhawa kusvika mudzimba.
Kukurudzira kuti vanhu vatenge, Macheso arikutengesa dambarefu rake nedhora rimwe chete.
Macheso akapedzisira kubuditsa dambarefu muna 2012 apo akarova Magariro.
Nyaya yekuti vanhu vainge vachiba vachitengesa mumigawaga kana kuti piracy ndiyo yaanoti yainge yamuodza moyo. Asi vamwe vakada kumboisa dambarefu idzva iri padandemutande reYout Tube asi rikazobviswa.